Minister of Commerce Calls for Precautions to Mitigate Impact on Trade | Myanmar Business Today
HomeBusinessMinister of Commerce Calls for Precautions to Mitigate Impact on Trade
Even though the country’s trade seems to be mildly impacted by the COVID-19 last fiscal year, the Union Minister of the Ministry of Commerce has called for precautions to mitigate the impact of the pandemic in the 2020-2021 Fiscal Year as there are more possibilities of the impact.
“We can assume that there wasamild impact on the trade by the COVID-19, but we need to prepare for 2020-2021 because there are possibilities,” Dr. Than Myint, the Union Minister for the Commerce, said during the Cooperation Meeting held online on October 29.
The country needs to develop and employ measures to improve trade in the post-COVID time, he said. Meanwhile, the ministry is implementing all the parts of the COVID-19 Economic Relief Plan and has employedafully online system to issue export/import licenses while easing license fees. Moreover, Myanmar TradeNet2.0 is also going to commence soon.
“In addition to the trade relation tasks, the ministry is also participating in the task of developing special economic zones and private sector development,” he said.
In the 2015-2016 Fiscal Year, the country sawa$5.5 billion trade deficit where the deficit dropped to $1.5 billion in the 2019-2020 Fiscal Year.
COVID-19 ကာလတွင် ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ၌ ထိခိုက်မှုနည်းပါးသည်ဟု ယူဆနိုင်သော်လည်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တွင် ထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်သည့် အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် စီးပွားကူးသန်း ဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က သတိပေး လိုက်သည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၃)၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီး ဌာန၌ Virtualစနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ် သော ဝန်ကြီးဌာန၏လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်း အဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“COVID-19 ကာလတွင်လည်းကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ တွင် ထိခိုက်မှုနည်းပါးသည်ဟု ယူဆနိုင်သော် လည်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တွင်ထိခိုက်မှုရှိလာနိုင် သည့် အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်”ဟု ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် COVID-19 အလွန်ကာလ၌ကုန်သွယ် မှုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်မှုသက်သာရေး စီမံ ချက် (CERP) ကိုလည်းလိုက်ပါအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းကို အချိန်နှင့် ငွေကြေးကုန်ကျမှု သက်သာစေရေးအတွက် Fully Online စနစ်ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ကြေးများဖြေလျှော့သတ်မှတ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး MyanmarTradeNet 2.0 ကိုလည်းစတင်အသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
“ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ အပြင် နိုင်ငံတော်ကပေးအပ်သည့် တာဝန်များ ဖြစ်သော မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်များ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေး တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။” ဟု ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပြောသည်။
စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြည်ပကုန် သွယ်မှုလိုငွေ ၅.၅ ဘီလီယံခန့်ရှိခဲ့ရာမှပို့ကုန်တိုးတက် မြင့်မား အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကုန်သွယ်မှုလို ငွေ ၁.၄ ဘီလီယံခန့်အထိ လျော့ကျခဲ့ပါကြောင်း သိရသည်။
Previous articleGlobal gold price eased, but the local prices show no reflection
Next articleGovt Order Micro-financiers to Waive the Due Repayment until April